Website title tag optimization - Myanmar SEO Tutorials - နည်းပညာ
ဒီနေ့ကတော့ SEO ရဲ့ (အတိအကျ ပြောရရင်တော့ on page seo ရဲ့) အရေးကြီးဆုံး အသက်ဖြစ်တဲ့၊ title tag အကြောင်းကို ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ နမူနာ website တစ်ခုနဲ့သင်ပေးပါမယ်။ နမူနာ website ကိုတော့ www.seo.sg website နဲ့ ထားလိုက်ပါမယ်။ အဲဒီတော့ အရင်ဆုံး keyword research လုပ်ပါမယ်။ site ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က Singapore မှာ SEO ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးဖို့ပါ၊ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးသင့်တဲ့ အဓိက keywords တွေက SEO, Singapore SEO, Singapore SEO Service တွေဖြစ်ပါတယ်။ (တစ်ကယ်တော့ site တစ်ခုအတွက် ဒီထက်ပိုများသင့်ပါတယ်၊ ဥပမာပြတာမို့လို့ နည်းနည်းပဲ ရွေးပြထားပါတယ်)။ Target ကတော့ အဲဒီ keywords တွေနဲ့ www.google.com.sg မှာ တက်အောင်လုပ်ရပါမယ်။ ဒီတော့ကာ ရော့အင့်ဆိုပြီး သင်ခန်းစာ မပေးခင်၊ title tag ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ မပြောခင် နည်းနည်းမေးချင်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာတွေကို ဒီအထိအောင် ဖတ်လာပြီးပြီဆိုတော့ google.com မှာ တစ်စုံတစ်ရာကို ရှာဖူးကြပါသလား? ရှာဖူးတယ်ဆိုရင်ကော ဘာတွေက ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ သတိထားမိကြပါသလား? ထားမိမိ မမိမိ ကျွန်တော်ပြောပြတော့မယ်။ ၁။ title tag က search လုပ်တဲ့အခါမှာ ထိပ်ဆုံးက ပေါ်ပါတယ်။ သေချာရှင်းပြပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ နမူနာ ထားထားတဲ့ www.seo.sg website ကို သွားကြည့်ပါ။ Website ရဲ့ title ကို မှတ်သားပါ။ ပြီးရင်တော့ google.com.sg မှာ SEO price ဆိုတဲ့ keyword နဲ့ ရှာကြည့်ပါ။ နံပါတ်နှစ် နေရာလောက်မှာ တက်မယ်ထင်ပါတယ်။ Title tag မှာ ပါတဲ့ တူတဲ့စကားလုံးတွေကို bold လုပ်ပြီး ပြထားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Myanmar Web Designer ဆိုက်ကိုသွားကြည့်ရပါမယ်။ အဲဒီ website ရဲ့ title မှာ ထည့်ထားတာက Myanmar Web Designer – SEO services, website design creator အဲဒါကို သိပြီးပြီဆိုရင်တော့ google.com မှာ ရှာကြည့်ပါမယ်။ google မှာ Myanmar SEO ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ရှာကြည့်ပါ။ တက်လာတဲ့ စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ။ အပေါ်ဆုံးမှာ ရှိတာက ကျွန်တော်တို့ title မှာ ထည့်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေထဲက တူညီတဲ့ စကားလုံးတွေကို bold လုပ်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီလို ကျွန်တော်တို့ ရှာတာနဲ့ ကိုက်တဲ့ result တွေ တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ရှာတာနဲ့ တူတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုပဲ click နှိပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ title tag မှာ ကိုယ်တစ်ကယ်တက်ချင်တဲ့ keyword တွေပဲ ထည့်ပါ။ ဒါမှ တစ်အချက် အကျိုးရလဒ်က ကိုယ့်ရဲ့ website ကို click နှိပ်တဲ့လူ များစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ title tag မှာ space အပါအဝင် စာလုံး အလုံး ၆၀ လောက်ပဲ ထည့်ပါ။ စာလုံး width ကျဉ်းတဲ့ စကားလုံးမျိုး (ဥပမာ။ ။ l, i, t, j) ဆိုရင်တော့ များများထည့်လို့ရပေမယ့် ပျမ်းမျှ အလုံး ၆၀ ပဲထည့်ပါ။ ၂။ search engine တွေက title tag ကို ဖတ်ပြီးတော့ ranking ပေးတာဖြစ်လို့ title tag က ကောင်းနေ၊ မှန်နေရင် ranking ကောင်းမယ်။ ၃။ user တွေက title မှာရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သေချာသိပြီးမှ click လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်၊ တစ်ကယ့် အလားအလာရှိတဲ့ user မျိုးကိုပဲ ကိုယ့်ဆီ ရောက်လာစေတယ်။ (ဥပမာ။ ။အလုပ်အပ်မယ့်သူ၊ ကိုယ်နဲ့ နယ်ပယ်တူ ပူးပေါင်းလုပ်ချင်တဲ့သူ၊ စသည်..) ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ title tag အကြောင်းကို ရှင်းလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
Facebook တွင် မျှဝေရန် | Twitter တွင် မျှဝေရန် website SEO နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကူအညီ၊ ဆွေးနွေးမှု၊ စသည်တို့ကို လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် [email protected] သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ Related Links: Singapore Search Engine Optimization (SEO)
← XAMPP ဆိုတာဘာလဲ – What is XAMPP? XAMPP တင်နည်း – How to install XAMPP? →
One thought on “Website title tag optimization – Myanmar SEO Tutorials”
Kaung Lin says:
ခုလိုရေးပေးတဲ့တွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ 😀